နည်းပညာ Archives - Myanmar Questions And Answers
Sim2Fly အကြောင်း လေးသိချင်လို့ပါရှင့်
on March 24, 2021 in နည်းပညာ.
သေနတ် အခြေခံ အလုပ် လုပ်ပုံ
on March 11, 2021 in နည်းပညာ.
အသံချိန်း အသံပြောင်း sofware သိချင်လို့ပါ။
on January 23, 2021 in နည်းပညာ.
ကိုယ့်မွေးနေ့ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် နဲ့ သိချင်ရင် ဘယ်လိုရှာရမလဲ
on July 12, 2020 in နည်းပညာ.
Facebook Page ဘယ်လိုထောင်မလဲ။
on July 7, 2020 in နည်းပညာ.
ကွန်ပြူတာ Windows 10 မှာ Unicode ရော Zawgyi ရော ရေးလို့ရအောင်ဖတ်လို့ရအောင်ဘယ်လို လုပ်ရလဲ
Desktop PC တွေမှာ power supply ပျက်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို signal တွေပ့ပါသလဲ
on July 2, 2020 in ကွန်ပြူတာရေးရာ.
MI ဖုန်းတွေကို Google Play ထည့်ချင်လို့ပါ
on June 21, 2020 in နည်းပညာ.
ဗီဒီယို ပေါ်မှာ မြန်မာစာတမ်းဘယ်လို ထိုးရလဲ
ကိုယ့်ပုံမှာ အလံပုံလေးတွေ ထည့်ထားကြတာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ သိချင်လို့ပါ
on June 20, 2020 in နည်းပညာ.